365 kun oo rakaab ah maalinti laga bilaabo Marmaray, 15 Luulyo Martyrs Bridge Faa'iidooyinka 156 kun Gawaar Maalintii | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMarmaray 365 kun oo Rakaab Maalintii, 15 Luul Martyrs Bridge 156 Kun Gawaarida ah ayaa Faa'iideysata Maalin
08 / 11 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, hyperlinks, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
marmaraydan kun oo rakaab ah maalinti shahiidnimada ah waxaa ku shahiiday koprusunden kun oo baabuur maalin walba
365 kun oo rakaab ah maalinti laga bilaabo Marmaray, 15 kun oo gawaarida maalin walba laga soo qaado Buundada Martyrs Wasiirka Turhan wuxuu ka qeybgalay taxanaadkii ugu horreeyay ee 'Wadahadalka Magaalada iyo Sharciga' ee uu soo qabanqaabiyey Fatih Sultan Mehmet Vakıf Kuliyada Sharciga ee Jaamacadda Haliç Campus Hall Hall.
Khudbaddiisa oo cinwaan looga dhigay İstanbul Istanbul marka loo eego Siyaasadaha Gaadiidka burada, Turhan wuxuu sheegay in baahiyaha gaadiid ee dadku ay ku saleysan yihiin waqtiyadii hore.
Sanadihii la soo dhaafay, gaar ahaan wixii ka dambeeyay taariikhda Jamhuuriga, kororka tirada dadka ee Istanbul, deganaanshaha aan caadiga ahayn iyo qaab dhismeedka ayaa soo ifbaxday Turhan, hase yeeshe, adeegyada kaabayaasha aan qorshaysnayn ayaa sidoo kale dhibaatooyin ku keenay nolol maalmeedka dadka, ayuu yiri.
Nüfus Dadka Magaalada Istanbul ayaa kor u kacay dabaqa 12 '
Turhan wuxuu sheegay in mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee dunida casriga ah ay yihiin dhibaatooyinka gaadiidku “Sidaa darteed, waddamadu waxay muhiimad gaar ah u leh arrimahaas. Waxay isku dayayaan inay ka gudbaan dhibaatada siyaasadaha gaadiidka. Magaalooyinka, dhinaca kale, waxay safka hore ugu jiraan halka dhibaatooyinka gaadiidka ay gaaraan heerar xanuun badan. Maaddaama Istanbul 15 ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee adduunka ee ay ku nool yihiin dad ka badan hal milyan oo qof, waxay muddo dheer ahayd mid ka mid ah ajandaha mudnaanta koowaad ee siyaasadaha gaadiidka.
Turhan wuxuu tilmaamay in arrinta ugu weyn ee gaadiidka Istanbul ay tahay kororka dadka magaalada oo ka badan dabaqa 70 inkasta oo kororka dabaqa 3-4 sanadkii la soo dhaafay ee 12. Intaa waxaa sii dheer, marka aan ku darno xawaaraha sii kordheysa ee kaabayaasha warshadaha iyo ganacsiga ka dhisan magaalada Istanbul ee gobolka, xaaladdu waxay kasii daraysaa tii hore. Xaqiiqdii, aragtida aragtida ah, diyaarinta kaabayaasha lagama maarmaanka ah ayaa la qabtay waqti iyo siyaasadaha gaadiidka buundada maanta la waayo.
"15 July Tirada gawaarida maraya Buundada Martyrs ee hal maalin 156 kun"
Turhan wuxuu xasuusiyay in dhibaatada taraafikada ee Istanbul ay ahayd mowduuca wararka ka yimid 45 sano ka hor uuna u sii socday sida soo socota:
“Dadka magaalada waxay ahaayeen 4 milyan. Waqtigaas, 26 waxay dhaafeysay kun gawaari oo ka socota Buundada Bosphorus waxayna muwaaddiniintu ka cawdeen inay ku qaataan in ka badan saacadaha 1 taraafikada iyagoo hal meel u safraya. Sidaad ogtahay, waqtigaas, waxaan qabnay dad karti leh oo masuul ah oo fikrado kala duwan ka qaba bal in buundadan la dhisi doono iyo in kale. 40-50 sano ka hor, dhibka taraafikada ee Istanbul wuxuu ahaa mowduuca wararka isagoo dareensan in gambaleelka qaylo-dhaantu uu soo yeerayo. Si kastaba ha noqotee, wax talaabooyin ah lagama qaadin arintan. Maanta dadka magaalada waxay ku dhowdahay 16 milyan. Tirada gawaarida diiwaangashan waxay ku dhowdahay 4 milyan 200 kun oo tanna wali ma aysan gaarin meeshii la fadhiisan lahaa. 15, oo maanta loo yaqaanno, waa tirada gawaarida maraya Buundada Martyrs maalin gudaheed. Waqtigii furitaanka, ku dhawaad ​​156 kun oo gawaarida ayaa gudbaya maanta. Haddii aad weydiisato awoodda dhabta ah ee buundada, markaad qiimeyso iyada oo loo eegayo heerka adeegga, waxaad runtii u baahan tahay inaad ku gudubto 26 kun oo gawaarida ah haddii aad ku gudubto buundooyinka adeegga safarka joogtada ah ee dhexgalka. Awoodda cufnaanta cufnaanta ee taraafikada 156 kun. Laakiin hadda waxaa jira celcelis ahaan 90 kun oo gawaarida maraya buundadan.
Mümkün Sidii aan dhowaan sameynay, waa suurtagal in laga hortago dhibaatada taraafikada oo aan yareyno saameynta uu leeyahay ”
Isagoo og in xaaladani ay si xun u saamaysay gaadiidku, ayuu yidhi Turhan:
Ma waxaad arkaysaa tas-hiilaadkii kaabayaasha dhaqaalaha ee soo maray buundooyinkayaga kale oo ay hore u qorsheeyeen oo ay iskudhaceen maamullada maxalliga ah sanadihii la soo dhaafay si wax looga qabto dhibaatada gaadiidka ee Istanbul sannadihii ugu dambeeyay kuwaas oo loo dhisay in lagu yareeyo isu socodka labada dhinac ee Bosphorus. Waxaan gaynay Fatih Sultan Mehmet Bridge, Eurasia Tunnel iyo Yavuz Sultan Selim Bridge sidii dariiqa oo kale.
Isagoo Carabka ku adkeeyay muhiimada mashaariicda mega ee dhowaan laga hirgaliyay magaalada Istanbul, Wasiirka Turhan ayaa yiri, maanta ma suurta gal ma ahan in si buuxda loo xaliyo dhibaatada laakiin waa macquul in laga hortago kororka dhibaatada si aan macquul aheyn loona yareeyo saameyntooda. Tan waxaa ku jira cilmiga bulshada, dhaqaalaha, tikniyoolajiyadda, kaabayaasha dhaqanka iyo xaaladaha sharciga. Sidaa darteed, waxaan wajahaynaa dhibaatooyinka noocan oo kale ah ee adag iyo kuwa badan. Markii aan kahadalno siyaasadaha gaadiidka ee Istanbul, waa inaan tixgelinno arrimahan oo dhan. Gaar ahaan bandhigga, hababka populist waa in laga fogaadaa. Qaababkani waxay ka soo horjeedaan nooca iyo niyada siyaasadaha gaadiidka. Waad sameyn doontaa ganacsi, waxaad sameyn doontaa mashruuc, waad maamuli doontaa mashruuc, waad bixin doontaa adeeg.
Turhan wuxuu sheegay in sicirka lahaanshaha baabuurtu uu kordhin doono waqti ka dib isla markaana ay jiri doonaan gaadiid iyo jidad badan waddooyinka sidaas darteed, nidaamyada kaabayaasha gaadiidka cusub ayaa looga baahan yahay magaalada Istanbul waana in la qorsheeyaa gaar ahaan tixgelinta dhismaha iyo qaab dhismeedka magaalada.
Celcelis ahaan 365 kun oo rakaab ah ayaa ka faa'iida maalin walba Marmaray ”
Wasiir Turhan wuxuu cadeeyay in mashaariicda muhiimka ah ay kusii socdaan magaalada Istanbul, wuxuuna ku soo gabagabeeyey ereyadiisa sida soo socota:
Uz Waxaan si adag oo taxadar leh u shaqeyneynaa si aan u qaadno kaabayaasha gaadiidka ee Istanbul meel u qalma sharafteeda, cabbirkeeda iyo kartideeda iyadoo la fulinayo mashaariicdii la dhammeystirey, socda iyo bartilmaameedka. Marmaray, oo la galiyay sannad-guurada 90 ee aas-aaska jamhuuriyadeena, waxay ahayd mid ka mid ah gunaanadkii ugu muhiimsanaa kuwan. In kasta oo nidaamka gaadiidka Marmaray, 5,5, oo u shaqeeya nidaamkan, uu u adeego xarunta 5 sanadka oo dhan, 43 wuxuu bilaabay inuu u adeego joogsi maanta iyo 365 kun oo rakaab ah ayaa ka faa'iideysanaya adeeggan maalin kasta. "
TCDD 156. 156 muwaadin da'diisu tahay YHT isaga oo u diraya Konya dabaaldega
15 July Julyrs Bridge Waddada Iskudhufka Asphalt waxay ka shaqeysaa wadada O1
Eurasia Tunnel si ay uga gudbaan 70 Thousand Vehicles
Xariiqa Baska ee 365 ee Kocaeli ayaa La Soconaya Halkan
Jaamacadda Fatih Sultan Mehmet Foundation
Nidaamka gaadiidka Marmaray
Imisa rakaab ah ayaa maalintiba tagaya Marmaray